what, when, why: Block गरिएका साईट खोल्ने अर्को सजिलो तरिका
Block गरिएका साईट खोल्ने अर्को सजिलो तरिका
Block गरिएका साईटहरु खोल्ने तरिकाहरु मध्य यो पनि एक चोटि ट्राइ गरेर हेर्नुहोस् । कुनै कुनै बेला यसले पनि काम गर्छ । तर कुनै कुनै ठाउँमा यसले काम नगर्न पनि सक्छ । तपाईं पनि एकपल्ट कोशीस गरेर हेर्ने कि ? तरिका simple छ ।
१) Start > Run गर्नुहोस् र त्यहा cmd टाईप गरेर enter गर्नुहोस् ।
२) तपाईंको कम्प्युटरको Command Promt बक्स खुलेपछि त्यहाँ Ping टाईप गरेर तपाईंले खोल्नु पर्ने साईटको url टाईप गर्नुहोस् र enter गर्नुहोस् ।
जस्तै : ping www.facebook.com र Enter हान्नुहोस् ।
३) त्यहा केही नम्बरहरु देखिन्छन, IP Address जस्तै www.facebook.com को 66.220.146.25
४) यो नम्बरलाई कपि गर्नुहोस् र तपाईंको ब्राउजरमा पेस्ट गर्नुहोस् र Enter गर्नुहोस् ।
५) तपाईंको ब्राउजरमा facebook को पेज खुल्नेछ ।
अरु पनि Block गरिएका साईट खोल्ने तरिकाको लागि पहिलेका पोस्टहरु हेर्न तलको link मा जानुहोला
I tried it and it worked!!! thanx kyamazzza!!!!
it worked before but now the numbers can't be copied. maile thuprai patak try gare copy nai hudaina. any solution????
कुमारजी, नम्बर कपि भएन भने उक्त नम्बर याद गर्नुहोस् र ब्राउजरको address बारमा टाईप गरेर enter गर्नुहोस् ।
maile pani try gae tara sakina copy nai bhayena feri tyo number rakhda pani bahyena may pura janina ki plz datails ma bhani dinuna plz......
Anonymous जी, उक्त नम्बर कपि गर्नको लागि cmd मा राईट क्लिक गर्नुहोस् र mark लाई select गर्नुहोस् । अब माउस point ले उक्त नम्बर लाई hightlight गर्नुहोस् र Ctrl+C गर्नुहोस् र ब्राउजरको address बारमा Ctrl+v गर्नुहोस् ।
सबै भन्दा सजिलो ultrasurf सफ्ट्वेर हो। यो तपाईंहरुसँग छ भने firewall तथा सबै ब्लक्क गरे का साइट खोल्न मिल्छ म सँग यो सफ्ट्वेर छ। एस्लाई instell गर्नुपनिपर्दैन। एस्ले जस्तोसुकै साईट पनि खुल्छ।